Gịnị Bụ Ọbịbịa Kraịst?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Pangasinan Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Baịbụl kwuru ọtụtụ ugboro gbasara mgbe Kraịst ga-abịa n’ọdịnihu ikpe ndị mmadụ ikpe n’ụwa. * Dị ka ihe atụ, Matiu 25:31-33 kwuru, sị:
“Mgbe Nwa nke mmadụ [bụ́ Jizọs Kraịst] ga-abịa n’ebube ya, ya na ndị mmụọ ozi ya niile, mgbe ahụ ka ọ ga-anọkwasị n’ocheeze ya dị ebube. A ga-emekwa ka mba niile zukọta n’ihu ya, ọ ga-ekewapụkwa ndị mmadụ n’ebe ibe ha nọ, dị nnọọ ka onye ọzụzụ atụrụ si ekewapụ atụrụ n’ebe ewu nọ. Ọ ga-edebe atụrụ n’aka nri ya, ma debe ewu n’aka ekpe ya.”
Oge ikpe a ga-eso ‘n’oké mkpagbu’ nke a na-enwetụbeghị ụdị ya kemgbe ụwa. Oké mkpagbu ahụ ga-ebi mgbe a ga-alụ agha Amagedọn. (Matiu 24:21; Mkpughe 16:16) Ndị iro Kraịst a kpọrọ ewu n’ihe atụ a, “ga-anata ntaramahụhụ ikpe ọmụma nke bụ́ mbibi ebighị ebi.” (2 Ndị Tesalonaịka 1:9; Mkpughe 19:11, 15) Ma, ndị niile ji obi ha niile jeere ya ozi, ya bụ, ndị ahụ bụ́ atụrụ, ga-enwe olileanya inweta “ndụ ebighị ebi.”—Matiu 25:46.
Olee mgbe Kraịst ga-abịa?
Jizọs sịrị: “Ọ dịghị onye maara ụbọchị ahụ na oge awa ahụ.” (Matiu 24:36, 42; 25:13) Ma, o nyere “ihe ịrịba àmà” nke ga-eme ka a mata na oge ọ ga-abịa eruola.—Matiu 24:3, 7-14; Luk 21:10, 11.
Kraịst ọ̀ ga-abịa n’ahụ́ mmụọ ka ọ̀ bụ n’anụ ahụ́ nkịtị?
Ọ bụ ahụ́ mmụọ ka Jizọs nwere mgbe a kpọlitere ya n’ọnwụ. N’ihi ya, ọ ga-abụ mmụọ mgbe ọ ga-abịa, ọ gaghị ebu anụ ahụ́. (1 Ndị Kọrịnt 15:45; 1 Pita 3:18) Ọ bụ ya mere Jizọs ji gwa ndịozi ya n’ụbọchị bọtara ụbọchị ahụ ọ nwụrụ, sị: “N’oge na-adịghị anya, ụwa agaghịkwa ahụ m ọzọ.”—Jọn 14:19.
Ihe ndị na-abụghị eziokwu ndị mmadụ na-ekwu gbasara ọbịbịa Kraịst
Ụgha: Mgbe Baịbụl kwuru na ndị mmadụ ga-ahụ Jizọs “ka ọ na-abịa n’ígwé ojii,” ọ pụtara na Jizọs ga-abịa otú ndị mmadụ ga-ahụ ya.—Matiu 24:30.
Eziokwu: Ọtụtụ mgbe, Baịbụl kwuo banyere ígwé ojii, ihe ọ na-ekwu bụ ihe a na-anaghị ahụ anya. (Levitikọs 16:2; Ọnụ Ọgụgụ 11:25; Diuterọnọmi 33:26) Dị ka ihe atụ, Chineke gwara Mozis, sị: “M ga-abịakwute gị n’oké ígwé ojii.” (Ọpụpụ 19:9) Ma, Mozis ahụghị Chineke anya. N’ihi ya, Kraịst ‘ịbịa n’ígwé ojii’ pụtara na ndị mmadụ ga-ahụ ihe ndị ga-egosi na Jizọs abịala, ma ha agaghị eji anya nkịtị ahụ ya.
Ụgha: Mkpughe 1:7 kwuru na mgbe Jizọs ga-abịa, “anya niile ga-ahụ ya.” Ihe a gosiri na ndị mmadụ ga-eji anya ha ahụ ya.
Eziokwu: Mgbe ụfọdụ, okwu Grik e si sụgharịta “anya” na “ịhụ ụzọ” na Baịbụl nwere ike ịpụta ịghọta ihe ma ọ bụ ịmata ihe, ọ bụghị iji anya nkịtị ahụ ihe. * (Matiu 13:15; Luk 19:42; Ndị Rom 15:21; Ndị Efesọs 1:18) Baịbụl kwuru na kemgbe a kpọlitere Jizọs n’ọnwụ, o bi “n’ìhè a na-apụghị iru nso, . . . ọ dịghịkwa mmadụ ọ bụla pụrụ ịhụ ya.” (1 Timoti 6:16) N’ihi ya, na Baịbụl sịrị na “anya niile ga-ahụ ya” pụtara na ndị mmadụ ga-amata na ọ bụ Jizọs ka Chineke ga-eji kpee ikpe.—Matiu 24:30.
^ para. 3 Ọ bụ eziokwu na ọtụtụ na-akpọ ọbịbịa Kraịst “ọbịbịa nke abụọ nke Kraịst,” okwu ahụ e nweghị ebe ọ dị na Baịbụl.
^ para. 14 Gụọ peeji nke 451 na nke 470 n’akwụkwọ bụ The New Thayer’s Greek-English Lexicon of the New Testament (1981).